Maalinta: Ogast 4, 2017
Gaadiidka shidaalka ee Elazığ! .. Machad 2 ayaa lumiyay noloshiisa
Injineer 2 ayaa naftiisa ku waayey ka dib markii la afgembiyay tareenka xamuulka qaada ee Elazığ Sida ay sheegayaan wararka la helay, tareenka xamuulka xamuulka ah ee ku sii jeeday Malatya dhanka jihada Elazığ wuxuu ku yaal aagga Selmut Creek ee degmada Baskil. [More ...]
Daraasado ka socota Karaman hoosteeda ee Larval
Dawlada Hoose ee Karende iyo Agaasinka Guud ee TCDD oo kaashanaysa dhismaha mashruuca ayaa bilaabay dardar galinta dhismaha Larende Underpass. Duqa Magaalada Ertuğrul Çalışkan, Kuxigeenka Duqa Duran Kabaağaç iyo Duqa Magaalada Mustafa Sarı [More ...]
Bayaanka bilayska ee kuyaala tareenka ayaa sheegaya 'Muusigga Gülşah Erol waa la garaacay'
Tareenka dhulka hoostiisa ku yaal, waxaa jiray dood ku saabsan codsi ay booliisku ku doonayeen in ay ku baadhaan boorsada muusigga ee Gülşah Erol boorso cello. Fannaanka ayaa la wadaagay waayo-aragnimadiisa warbaahinta bulshada. Waaxda booliska magaalada Istanbul ayaa bayaan ka soo saartay mowduuca [More ...]
Tikidka tareenka ka soo qaada gaadiidka TCDD illaa iidada qamriga
Gaadiidka TCDD waxay shaaciyeen in tigidhada tareenka la iibin doono inta lagu gudajiro Ciidul Adxaa si ay uga caawiyaan rakaabku inay qorsheeyaan safarradooda. Muwaadiniintu waxay qorsheynayaan inay fasaxa la qaataan kuwa ay jecel yihiin ka hor Iidducaadka Ciidda [More ...]
Howlwadeennada hawlaha guud waxay u kala qaybsadeen laba xaafadood
Mamak Demirlibahçe ee buundada tareenka ee loo burburiyey mashruuca Başkentray ayaa loo xiri doonaa taraafikada ka dib dayactirka dadka deggan ay dareenkooda ka dhiibteen xaafadda. Xaafadda, dhismaha buundada lama dhamayn taariikhda ballanqaadka, ayuu ku dooday. Republic of Turkey [More ...]
Dilkii muusikada Gülşah Erol ee Istanbul Metro
Farshaxaniistaha Grollşah Erol, fariin uu la wadaagay akoonkiisa warbaahinta bulshada, wuxuu ku sheegay in ay garaaceen askarta booliiska albaabka laga raaco tareenka Kadıköy ee Istanbul. In kasta oo uu sheegay in uu ahaa muusikiiste, haddana Erol waxa uu sheegay in ay ku garaaceen gacmaha iyo gacmaha oo uu inkaariyay. [More ...]
Birdal iyo Kurt Logistics oo baadhay garoonka iyo tareenada
Kuxigeenka Undersecretary ee UDH Orhan Birdal, TCDD Transportation Inc. Maareeyaha guud Veysi Kurt, aaga saadka iyo tareenka gobolka Aegean laga helay. Birdal iyo Kurt, Maamulka Manisa Abaabul Leh (MOS) [More ...]
TCDD ayaa cambaareeyay weerarka ku qaaday Gaza
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), Eskişehir Duqa news saxaafadda Büyükerşen Yilmaz dhigay weerarkii waxshinimada ah oo lagu sameeyo warbixin qoraal ah oo ku saabsan comments ah. Bayaanka ay soo saartay TCDD waa sidan soo socota; [More ...]
Tababaraha ugu Fiican Caalamka 10
Tareenka Dunida ee Ugu Degdegga ah ee 10: Hyperloop One, kaas oo dhammaystiraya tijaabada ugu dhakhsaha badan abid ahaan 321 km saacaddii, iyo tartameyaasheeda, Spacetrain, ayaa filayay inay gaadho 1.200 km saacaddiiba. [More ...]
RayHaber 04.08.2017 Warbixinta Shirka
Daboolka Kursiga, Dhulka Tuubada iyo Armrest-ka Dhamaan Masruufka ayaa Lagu Gadanayaa Adeegga Dayactirka iyo Dayactirka
Nidaamka Akhriska Qoraalka Qorshaha Gaariga ah ee imanaya Xudduudaha Xuduudaha
Wasiirka Kastamyada iyo Ganacsiga Bülent Tüfenkci ayaa yidhi, iyor Waxaan u nimid nidaamka aqriska taarikada gawaarida. Waxaan ku tijaabinay Ipsala. Waxaan ogaanay inay si guul leh u shaqeyso. Waxaan ka hirgelin doonnaa nidaamka akhrinta taarikada gawaarida ee Kapıkule iyo irdo kale. ” [More ...]